'လူဖြူတွေဟာထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လိုတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ငါတို့ဘယ်တော့မှလေ့လာမှာမဟုတ်ဘူး' - WHITE EDI ကျောင်းသားများနှင့်ပြိုင်ပွဲအကြောင်းပြောဆို - သတင်း
'လူဖြူတွေဟာထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လိုတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ငါတို့ဘယ်တော့မှလေ့လာမှာမဟုတ်ဘူး' - White Edi ကျောင်းသားများနှင့်ပြိုင်ပွဲအကြောင်း
မီဒီယာရှုခင်းသည်လူဖြူမဟုတ်သောစိတ်ဒဏ်ရာကိုအာရုံစိုက်သောလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဆိုင်ရာပုံပြင်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ဤအဖြစ်အပျက်များသည်မှန်ကန်ပြီးအရေးကြီးသည့်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်သော်လည်းလူမှုရေးပြောင်းလဲမှုကိုဆွေးနွေးရန်ဘေးဖယ်ခံထားရသောလူမှုအသိုင်းအ ၀ ိုင်းတွင်လည်းတာဝန်ရှိသည်။
လူဖြူမဟုတ်သောလူပုဂ္ဂိုလ် (များကဲ့သို့) ကျွန်ုပ်သည်စိတ်ဒဏ်ရာသို့မဟုတ်ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်သက်ဆိုင်သောကိစ္စရပ်များအားရွေးချယ်ရန်တောင်းဆိုခြင်းကြောင့်စိတ်မကျေမချမ်းဖြစ်ပြီး buzz ကွယ်လွန်သည့်အခါလျစ်လျူရှုခံရသည်။
ထို့အပြင်ပြissuesနာများစွာဖြစ်ပွားနေသည့်ကာလအတွင်းအာရှဆန့်ကျင်ရေးလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိထင်ရှားပေါ်လွင်။ မုန်းတီးမှုများဖြစ်ပေါ်နေသည်။ လူမည်းများအားဆန့်ကျင်သောလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုပုံစံအမျိုးမျိုးကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်နေရဆဲဖြစ်သည်။
သို့သော် 2020 ၏ 'အနက်ရောင်စတုရန်းနွေရာသီ' အထူးသဖြင့်လူမည်းတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့သည်။ လူဖြူတွေရဲ့ထုထည်ကြီးမားခြင်းကလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုရဲ့အလေးချိန်ကိုတပြိုင်နက်တွေ့မြင်နေရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ ၎င်းသည်လူဖြူများထံမှသူတို့သိသောလူမည်းများအပေါ်အပြစ်ပုံချခြင်းသို့မဟုတ်လူမျိုးရေးစိတ်ဒဏ်ရာအကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုသာပြောဆိုခြင်းကြောင့်လူဖြူများအပေါ်အပြစ်ပုံချခြင်းများဖြစ်စေခဲ့သည်။
အဖြူမဟုတ်သောပခုံးများကိုအဖြူလူမျိုးများအားပြိုင်ပွဲအကြောင်းပြောခြင်းအားဖြင့်အချို့ခရီးဆောင်အိတ်များကိုချွတ်ချင်သည် ကျနော်တို့ (ရာသီဥတုမရှိခြင်း) နှင့်မဟာမိတ်၏အဓိပ္ပာယ်ကိုအထိကြောင်းပြောဆိုမှုများရှိခဲ့ပါတယ်။ ဝိသေသလက္ခဏာဖြစ်သောအလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးရှုပ်ထွေးသောအကြောင်းအရာကိုအထောက်အကူပြုသောစကားပြောဆိုမှုငါးခုရှိပါသည်။
Carl - တတိယနှစ်
ခေါင်းစဉ်။ အခြားလူများရဲ့အတွေ့အကြုံများ, အဝိဇ္ဇာအဘို့နားလည်မှုမရှိခြင်း။ အခွင့်ထူး။ နှစ်ကြိမ်တွေးစရာမလိုဘဲအရာရာကိုလုပ်နိုင်ခြင်း။ ညမှာတစ်ယောက်တည်းလမ်းလျှောက်ထွက်လေ့ရှိတယ်။ ငါ့သူငယ်ချင်းသူငယ်ချင်းတွေနဲ့စကားမပြောခင်အထိငါဘာမှမစဉ်းစားခဲ့ဘူး။ အခြားသူများ၏ပြissuesနာများကိုသိရှိနားလည်ရန်မှာအဓိကဖြစ်သည်။ လူဖြူများသည်ကမ္ဘာကြီးကိုလူမျိုးပေါင်းစုံကွဲပြားပြီးတိကျသောအဖြစ်အပျက်များအဖြစ်ရှုမြင်ရခြင်း၏အကြောင်းအရင်းဖြစ်သော်လည်းတစ်ချိန်တည်းတွင်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာသည်အဓိပ္ပာယ်မဲ့နေသည်။
သမိုင်းကြောင်းအရဆွီဒင်သည်မိမိကိုယ်ကိုလူဆိုးများဟုမထင်လိုသော်လည်းလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနှင့်ပတ်သက်သောသုတေသနကို ဦး ဆောင်နေသည်။ လူတွေဟာခံစားခွင့်ရပိုင်ခွင့်တစ်ခုရှိတယ်၊ ငါတို့ကစနစ်ထဲမှာမပါ ၀ င်ဘဲအစွန်းရောက်ကမ္ဘာကြီးကိုဖန်တီးနိုင်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ လူဖြူတွေကသူတို့ရဲ့စွမ်းအားကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးတခြားသူတွေကိုပိုသက်သာအောင်လုပ်ဖို့မလိုပါဘူး။ လူမျိုးသိပ္ပံပညာသည်ကျွန်စနစ်ကိုတရားမျှတစေသည်။ ငါကလူတွေကိုညံ့ဖျင်းစွာဆက်ဆံဖို့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်။
၁၈၀၀ ပြည့်နှစ်များတွင်အင်ဒိုနီးရှားကိုဗြိတိန်၏ကျူးကျော်မှုကဲ့သို့အနောက်တိုင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံများမှအစပျိုးစစ်ပွဲများကိုအတိတ်ကာလကဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အကယ်၍ သင်သည်နံ့သာမျိုးကိုခိုးယူသောကိုလိုနီရှင်ကိုယခုရှင်ပြန်ထမြောက်နိုင်ပါကသူတို့ကိုသင်ဘာပြောမည်နည်း။
ငါဘာလို့မင်းအဲဒီလိုလုပ်ရတာလဲလို့ငါပြောချင်တယ်။ နံ့သာမျိုးများကိုအဘယ်ကြောင့်မသုံးဘဲသုံးပြီးခိုးတာလဲ။ ဟားဟား။
- The Architect🇯🇲 (@yxngpaps) ဒီဇင်ဘာလ 17, 2020
Izzy - စတုတ္ထနှစ်
ဒါဟာအလွန်ကြားနေ, Bland, ယေဘုယျင်အများကြီးအကြောင်းကိုပြောပြီမဟုတ်ပါဘူး။ မြင်နိုင်သော။ ငါနေထိုင်ခဲ့ဘယ်မှာအပေါ်အခြေခံပြီး, ဤစကားစိတ်ထဲထံသို့လာကြ၏။ ငါပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ကွဲပြားခြားနားကမ္ဘာကြီးအကြားမတိုက်ဆိုင်ရှိကွောငျးကိုမမွငျခဲ့သညျ မီဒီယာမှာတခြားလူမျိုးစုတွေရဲ့ကိုယ်စားပြုမှုကင်းမဲ့ခြင်းကိုငါတကယ်သတိမပြုမိခဲ့ဘူး၊
လူတွေကအဲဒါကိုမကျေမနပ်ဖြစ်တာအံ့သြစရာပဲ။ ပြောင်းပြန်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကိုမှန်ကန်သည်ဟုပြောလိမ့်မည်သူအမျိုးအစားများသည်အဝိဇ္ဇာဖြစ်သည်။ ထိုသို့မဟုတ်ပါဘူး။ ငါကအရူးလို့ထင်တယ်
- 𝑀𝓊𝓊𝓃 (@VyzerShock) မတ်လ 27, 2021
'White saviourism' အပေါ်ခင်ဗျားရဲ့အမြင်ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။ အနောက်တိုင်းမဟုတ်တဲ့အသိုင်းအ ၀ ိုင်းကိုမျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ရှိစေပြီးလူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုကိုဆက်လက်တည်မြဲစေမည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။
ကမ္ဘာကြီးကိုကျန်ကမ်ဘာ့ကိုမျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့စွာပန်းချီဆွဲခြင်းအားဖြင့်အနောက်ကိုအောင့်စေတယ်။ ငါ့ကျောင်းကအဲဒီမစ်ရှင်ခရီးစဉ်ကိုနှစ်စဉ်စီစဉ်ခဲ့တယ်၊ ငါသိတဲ့သူတော်တော်များများလုပ်ခဲ့တယ်။ သူတို့ထဲကအများစုဟာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် CV ကိုတင်ဖို့လုပ်ကြတယ်။ သူတို့ဟာဖြစ်ကောင်းအနုတ်လက္ခဏာခြမ်းကိုမမွငျခဲ့ပဲသူတို့ကသူတို့ကိုကြည့်ရှုစေပါလိမ့်မယ်စဉ်းစား။
ငါကလူရဲ့ Instagram ကိုအပေါ် scroll လျှင်, voluntourism ဓာတ်ပုံများကိုတက်လာလိမ့်မည်။ ကျွန်တော့်ကျောင်းမှာသူတို့ကို Them Kenya trip လို့ခေါ်တယ်။ ရောဂါကြောင့်တစ်နှစ်ဖျက်လိုက်ရတယ်၊ အကူအညီရဲ့အခြေအနေကိုပြတယ်။
ကလေးတွေအားလုံးအပြင်ထွက်ပြီးဖျက်လိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုဟစ်ကြွေးနေကြတယ်။ စာသားအရသူတို့ရဲ့အားလပ်ရက်ကိုဖျက်လိုက်လို့သာဖြစ်ပြီး ၀ န်ဆောင်မှုကိုတောင်မရခဲ့ဘူး။ အရွယ်ရောက်လူကြီးများသည်ဤပြissuesနာများကိုသတိပြုသင့်သည်။ ငါခရီးစဉ်အပေါ်သွားသောငါသိသောလူများကသူတို့လုပ်နေတာခဲ့ကြသည်ကောင်းတစ် ဦး အရာကြီးထင်ခဲ့ကြ, သူတို့ကအန္တရာယ်မမြင်ရ, ငါသည်လည်းထိုအချိန်ကမပြုခဲ့ ဒါပေမယ့်ဒီခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်ပေးတဲ့လူကြီးတွေကပိုပြီးရှုပ်ထွေးတဲ့ကိစ္စတွေကိုပိုပြီးသတိထားသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။
Whiteness နှင့်လူမှုရေးတရားမျှတမှုအကြားတင်းမာမှုနှင့်ပတ်သက်။ သင်ဘယ်လိုထင်သနည်း
လူတွေကကျွန်တော့်ကိုပြောတာကလူဖြူတွေ BLM / လူမှုရေးတရားမျှတမှုအကြောင်းကိုတင်တာကသူတို့ကိုယ်သူတို့ရဲရဲရဲရင့်ရင့်ကြည့်ဖို့နည်းဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေအများကြီးဟာခုခံကာကွယ်မှုအကြောင်းပါ။ လူဖြူတွေကမင်းကိုတိုက်ရိုက်စကားမပြောခင်မှာလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကိုငြင်းပယ်လိမ့်မယ်။ သို့သော်အမှန်တရားမှာပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးသည်မသက်မသာဖြစ်ပြီးအကာအကွယ်မဟုတ်ပါ။
လူတွေဟာလူမျိုးရေးအကြောင်းပြောခြင်းကိုခေါ်ခံရခြင်း၊ တည့်မတ်ပေးခြင်းကိုခံရမှာကိုကြောက်နေကြပြီးဘာမှမလုပ်ကြပါ ငါဖြူလူတွေကိုလူမျိုးရေးခွဲခြားခံရမယ့်သူကိုကြောက်ပြီးဒီပြissuesနာတွေနဲ့တကယ်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့မလိုလားဘူး၊
Anna - စတုတ္ထနှစ်
ကျွန်တော့်မိဘနှစ်ပါးစလုံးဟာဘယ်သန်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလစ်ဘရယ်လို့ရှုမြင်ကြပြီးကြင်နာမှု၊ လေးစားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော့်ရဲ့စကြဝvaluesာတန်ဖိုးတွေကိုသင်ပေးတယ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုကွဲပြားခြားနားတဲ့လူတွေအကြောင်းကျွန်တော့်ကိုကြာကြာမပြောခဲ့ဘူး။ သူတို့ဟာတကယ်တမ်းထိုင်ပြီးလူမျိုးကြီးထွားမှုအကြောင်းကျွန်တော့်ကိုစကားမပြောခဲ့ကြဘူး။
အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာကိုကျွန်ပြုခြင်းသည်တစ်ခုတည်းသောသမိုင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ထည့်သွင်းရန်ဂန္ထဝင်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်လူမည်းများအားအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သိရန်အရာအားလုံးဖြစ်ခြင်းကိုလူမသုတ်သင်ခြင်းဟူသောစိတ်ကူးကိုဆက်လက်တည်မြဲစေခဲ့သည်။ သမိုင်းအများစုသည်ကမ္ဘာ့စစ်ပွဲများအကြောင်း၊
ငါ့နှစျ၌များစွာသောအဆက်မပြတ်များနှင့်အဆက်မပြတ်ကသတိပေးခံခဲ့ရသောသူတို့အားရှိခဲ့သည်။ အိမ်တွင်းပါတီပွဲများတွင် N စကားလုံးကိုမကြာခဏစွန့်ပစ်လေ့ရှိပြီး၎င်းသည်လူမည်းများနှင့်စိမ်းကားစေပြီးစော်ကားသည်။ သို့သော်ဤလူမှုရေးဆိုင်ရာပြissuesနာများသည်အမြဲတမ်းအားနည်းနေခဲ့ပြီးထိုသင်ရိုးညွှန်းတမ်းကွာဟချက်များနှင့်လည်းဆက်စပ်နေသည်။
အဖြူရောင်ကိုသာမန်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းပုံဖော်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်ခြင်းကိုသင်ကြားပေးသူအားလုံးသည်ဥပမာအဖြူဖြစ်သည်။ Robert the Bruce ကျနော်တို့ကျော်ဗြိတိန်ကိုလိုနီခေတ်အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူကြဘူး, ကကျော်။ အဖြူရောင်စိန်ခေါ်မှုမရှိပါ - လူတွေကလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကိုဆန့်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုကိုပြုမူဖို့ကြိုးစားကြတယ်။
သို့မဟုတ်သင်ယခုဂျော့ခ်ျ Floyd ကိုတွေ့ပြီ၊ အချို့လူများကလူဖြူမဟုတ်သူများနှင့်သူတို့၏ဆက်ဆံမှုသည်လူမျိုးရေးစိတ်ဒဏ်ရာအပေါ်အမြဲအာရုံစိုက်ရမည်ဟုထင်မြင်ကြသည်။ သူတို့မိသားစု ၀ င်တွေပြောတဲ့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေအားလုံးကိုသူတို့ဝန်ပိပါတယ်။
အဖြူရောင်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကိုငြင်းဆိုခြင်းသည်တာ ၀ န်ခံမှုကိုရှောင်ရှားရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသင်သဘောတူမည်လား။
မင်းရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာကိုစိန်ခေါ်စရာမလိုဘဲသင်ကမ္ဘာပေါ်မှာတည်ရှိနိုင်လို့ပဲလို့ပြောချင်ပါတယ်။ ငါသူတို့ကမကောင်းတဲ့ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်မသက်မသာအခြေအနေများရှိသည်ချင်ကြဘူး, တာဝန်ခံမှုကိုရှောင်ရှားရဲ့ထင်ပါတယ်။ လူဖြူတစ် ဦး အနေနှင့်၎င်းကိုပြောဆိုရန်၊ သင့်အတွင်း၌အမြစ်စွဲနေသောအရာများကိုစိန်ခေါ်ရန်ခက်ခဲသည်။ Munroe Bergdorf ပြောခဲ့သကဲ့သို့, လူဖြူအားလုံးလူမျိုးရေးခွဲခြားဖြစ်ကြောင်းနှင့်ငါတို့ရှိသမျှသည်အောက်မှာနေဒီအစွန်းရောက်စနစ်၏အခြေအနေကြောင့်ပါပဲ။
- Rin (က) 🧚‍♀️ (@Cloudsskin) မတ်လ 23, 2021
လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုသည်, အစစ်အမှန်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီကြေညာချက်ကိုသင်သဘောတူပါသလား
လူမျိုးဆိုသည်မှာကွဲပြားမှုရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။ သို့သော်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုသည်ထိုကွဲပြားခြားနားမှုကိုအဓိပ္ပာယ်ရှိစေသည် - များသောအားဖြင့်အနုတ်လက္ခဏာ။ အထူးသဖြင့်လူမျိုးနှင့်လူမှုရေးအတွေ့အကြုံတို့အကြားဆက်နွယ်မှုကိုသင်စဉ်းစားသောအခါ၊ ဤဖော်ပြချက်ကိုကျွန်ုပ်သဘောမတူပါ။ ငါတောင်အာဖရိကမှာကြီးပြင်းလာတယ်။ အဲဒီလိုမျိုးမျိုးကိုမျိုးနွယ်စုအသိအမှတ်ပြုခြင်းကိုရှောင်ရှားဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ အသားအရောင်ခွဲခြားမှုကိုမကြာသေးမီကမှအဆုံးသတ်ခဲ့သည် လူမျိုး၏အတွေ့အကြုံကိုစဉ်းစားရန်အရေးကြီးသည်။
ယူဂျင်နစ်သည်မျိုးရိုးဗီဇအားဖြင့်လှုံ့ဆော်ပေးသောလူမျိုးရေးသိပ္ပံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ uni alumnus ဂရေဟမ်ဘဲလ်သည်ယူဂျင်နစ်ကိုထောက်ခံသည်။ သငျသညျပြိုင်ပွဲသိပ္ပံနှင့်ယူဂျင်းနှင့်ပတ်သက်။ အများကြီးသိသလားနှင့်ဘယ်လိုဒီနေ့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတည်ဆောက်ခဲ့သည်?
ငါအကြောင်းကိုအကြောင်းအများကြီးမသိခဲ့ပါ, ဒါပေမယ့်ငါက America မှာတီထွင်ပေမယ့်အထူးသဖြင့်ပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအတွက်ဗြိတိန်မှာအလွန်ထင်ရှားတဲ့ခဲ့သည်ထင်ပါတယ်။ သမိုင်းကြောင်းအရလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုပြသနာများကိုအမေရိကသို့တင်ပို့ပုံရသည်၊ ဗြိတိသျှအဖွဲ့အစည်းများက၎င်းတို့လက်များကိုဆေးကြောရန်ကြိုးစားကြသည်။
ငါယနေ့ခေတ်အတွေးအခေါ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်သုတေသနနှင့်သုတေသနများပိုမိုပြုလုပ်သောအချိန်တိုင်း၌လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနှင့်ယူဂျင်နစ်သမိုင်းအကြောင်းဆွေးနွေးချက်တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ။
- ဒေါက်တာ Pragya Agarwal (@DrPragyaAgarwal) မတ်လ 22, 2021
သငျသညျများစွာသောလူဖြူလူမျိုး၏လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု၏အသိအမြင်မကြာခဏစိတ္တဇ, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပညာရေးကန့်သတ်သည်နှင့်အရေးယူသို့တိုးချဲ့ပါဘူးထင်ပါသလား ဥပမာအားဖြင့်၊ လူများသည်လူမျိုးရေးဆန့်ကျင်ရေးစာအုပ်များကိုဖတ်ကြမည်ဖြစ်သော်လည်းသူတို့၏လူမျိုးရေးခွဲခြားသည့်မိသားစု ၀ င်များနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းမပြုပါ။
ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အဘို့အမြင့်မားတဲ့ရတဲ့ဘာနဲ့တူခံစားရတယ်
ငါကအသိအမြင်မကြာခဏတစ်ခုစိတ္တဇ, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလိုက်စားကန့်သတ်ကြောင်းတော်တော်လေးစစ်မှန်တဲ့ထင်ပါတယ်။ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုသည်မကောင်းကြောင်းငယ်ရွယ်စဉ်ကပင်သင်ပြောခဲ့ပြီးဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်၎င်း၏တည်ဆောက်ပုံနှင့်လူတို့အပေါ်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသည်ဆိုသည်ကိုသင်မပြောပေ။ ငါ 'ပညာတတ်' White ကလူလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုထုတ်ပြန်ချက်များသည်းခံနှင့်လူကြိုက်များဖြစ်ခြင်းကိုကယ်တင်ရန်ကော်ဇောအောက်မှာလှည်းမြင်ကြပါတယ်။
လူတော်တော်များများဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိစေပြီးအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသက်သာစေချင်တယ်။ ငါသတိထားမိသည်မှာကြီးမားသောအချက်မှာလူအများစုကလူမည်းဆန့်ကျင်ရေးလူမျိုးရေးကိုထောက်ခံခြင်းကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်းနှင့်ငြင်းပယ်ခြင်း၊ အညိုရောင်၊
ဤသူများသည် Black Square Summer Dance of Dance ၌သူတို့ ၀ ယ်ရန်အလျင်အမြန်ဝယ်သောစာအုပ်များကိုဖွင့်ခဲ့သလား။
- Kelechi (@kelechnekoff) အောက်တိုဘာလ 29, 2020
အဖြူရောင်ဝန်းရံထားသည့်ပုံစံအမျိုးမျိုးသည်လူမျိုးစုများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ လူဖြူတွေအကြောင်းလူတွေကယေဘူယျအားဖြင့်သူတို့ဟာအီတလီ၊ ဗြိတိန်နဲ့ပြင်သစ်တို့လိုနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကနေဘယ်နေရာကိုအခြေပြုတယ်ဆိုတာကိုအခြေခံလေ့ရှိတယ်။ သို့သော်ဤပုံစံများသည်များသောအားဖြင့်အန္တရာယ်ကင်းသည်။
အမေလီယာ - ဒုတိယနှစ်
'' မဟာမိတ်ဖြစ်ခြင်းဟာခရစ်စမတ်ညစာမှာသင့်ရဲ့လူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့ ဦး လေးကဘာပြောခဲ့သလဲဆိုတာကိုမင်းရဲ့အဖြူရောင်မဟုတ်တဲ့သူငယ်ချင်းကိုပြောတာထက်ပိုပါတယ် '' သင်သဘောတူသလား၊ မဟာမိတ်များ၏အယူအဆအကန့်အသတ်များနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့ထင်သနည်း။
ငါထင်မြင်ချက်ကမဟာမိတ်ဖြစ်သင့်သည်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ထင်ဟပ်ထင်ပါတယ်။ ငါဆိုလိုလူမျိုးရေးခွဲခြားပစ္စည်းပစ္စယထွက်ညွှန်ပြခြင်းနှင့်ဖြူမဟုတ်သောလူတို့အားစွန့်ပစ်ပြtheနာရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဆိုလို! ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခံထားရသူများ၏ဖိနှိပ်မှုကိုဖြေရှင်းရန်မှာ ၄ င်းတို့၏အခွင့်အရေးကိုမဟာမိတ်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုရမည်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။
အဖြူရောင်အမျိုးသမီးများသည် passive၊ ပျက်စီးလွယ်။ နူးညံ့သိမ်မွေ့သူများအဖြစ်ခိုင်မာသောအယူအဆရှိသည်။ White ကအမျိုးသမီးတွေအန္တရာယ်တွေအများကြီးကိုအသိအမှတ်မပြုသွားရသောအရာဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးသောဤမှားယွင်းသောအဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်။
သငျသညျ 'ကရင်' 'meme ယေဘုယျအားဖြင့်အဖြူအမျိုးသမီးတွေတစ် ဦး ချင်းအဖြူမိန်းမတို့ကိုနတ်ဆိုးများထက်ထိခိုက်စေစေအဆောက်အ ဦ များအကြောင်းကိုကြောင်းသဘောတူသလား
ဟုတ်တယ်။ တစ်ဖက်တွင်၎င်းသည်အာဏာအလွဲသုံးစားမှုကိုပြသသည်၊ သို့သော်အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ ၎င်းတန်ဖိုးသည်၎င်းကိုဟာသတစ်ခု၊ ရုပ်ပြောင်သို့လျှော့ချနိုင်သည်။ သင်တစ် ဦး ခြေလှမ်းနောက်ကျောကိုယူသောအခါမူကားဒါဟာ meme ထက်အများကြီးပိုပါတယ်။ Audre Lorde ကအဖြူရောင်အမျိုးသမီးများသည်အဖြူအာဏာ၏အန္တရာယ်အရှိဆုံးလက်နက်ကိရိယာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည် passive and ခြိမ်းခြောက်မှုမရှိကြောင်းပေါ်လွင်စေသည်။
ကျွန်တော့်အမေဟာကျေးလက်၊ သြစတြေးလျနိုင်ငံမှာနေထိုင်ပြီးလန်ဒန်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတကာကျောင်းတစ်ခုမှာကျွန်တော်တက်ခဲ့ပါတယ်။ ငါ့မိဘနှစ် ဦး စလုံးစကားစမြည်မှတော်တော်လေးပွင့်လင်းဖြစ်ကြပြီးငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုလူမည်းရဲ့ဆံပင်၏ထိတူသောအရာတို့ကိုအပေါ်သူတို့ကိုငါပညာပေးရန်ရှိခြင်းရှာပါ။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကျွန်ုပ်အဖေသည်လန်ဒန်ရှိ Black Lives Matter ဆန္ဒပြပွဲများသို့ကျွန်ုပ်နှင့်အတူလာခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့မှာစိန်ခေါ်မှုတွေရှိတယ်၊ ငါကတော့မစုံလင်ဘူး၊ ငါတတ်နိုင်သမျှသင်ပေးတယ်။
ယေဘူယျအားဖြင့်ဤစကားဝိုင်းအားလုံးကအဖြူရောင်အကြောင်းပြောခြင်းသည်အလွန်အဆင်မပြေ၊ ရှုပ်ထွေးပြီးစိတ်ရှုပ်စရာမလိုသောဖြေရှင်းနည်းဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြသည်။ ၎င်းသည်တည်ဆောက်ထားသည့်ကြားနေရေးနှင့်ပုံမှန်ဝိသေသလက္ခဏာဖြစ်ခြင်းသဘောကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်အဖြူရောင်မဟုတ်သောထူးခြားမှုနှင့်ခြားနားမှုကိုမည်သို့ဖြည့်ဆည်းပေးသည်ကိုလည်းပြသထားသည်။
ငါတစ်ခါမှမစဉ်းစားဖူးတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကတော့လူမျိုးစုများနှင့်၎င်းတို့နှင့်ဆက်စပ်နေတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအဓိပ္ပါယ်များအရအဖြူရောင်ကိုဘယ်လိုအမျိုးအစားခွဲခြားသလဲဆိုတာပါ။ ငါ q-White သည်လူဖြူလူမျိုးများအားလူမျိုးရေးအခွင့်ထူးများ၏ထိပ်တန်းနေရာတွင်ထားသည့်မရေရာဒွိဟများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်အတွက်အံ့အားသင့်ခဲ့သည်။
ကျွန်တော့်အတွက် Whiteness ဟာဥရောပသားဖြစ်သွားတဲ့အသားအရေဖျော့ဖျော့တွေပါတဲ့အံ့သြစရာကောင်းတဲ့အစက်အပြောက်တစ်ခုလိုထင်ရတယ်။ ငါပိုမိုလေ့လာသင်ယူသကဲ့သို့ငါလူမျိုး၏အမျိုးအစားအလွန်ပုဂ္ဂလဒိare္ဖြစ်ကြောင်းအဖြူလူမျိုးစု၏စိတ်ကူးဘယ်တော့မှတည်ငြိမ်လိမ့်မည်ဟုအရာတစ်ခုခုနားလည်သဘောပေါက်လာပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အတိတ်မှသင်ခန်းစာယူရန်လိုအပ်ပြီးအခြားသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်နားမလည်နိုင်သောအမှန်တရားများနှင့်ရင်ဆိုင်ရသည်ကိုလက်ခံရန်သတ္တိရှိဖို့လိုသည်။ ကမ္ဘာကြီးကလူဖြူမဟုတ်သူတွေနဲ့ဘာကြောင့်ရန်လိုနေရတာလဲလို့ကျွန်တော်စိုးရိမ်ပူပန်မိပြီးလက်တွေကိုလှည့်မကြည့်မိဘူး။ ငါ White ကလူများ၏မျက်မှောက်၌ချိုမြိန်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နှင့်လက်ခံမှုများအတွက်သခင်ဘုရားကိုတောင်းပန်အချိန်ဖြုန်းမည်မဟုတ်။
ဒီတာ ၀ န် ၀ တ္တရားအောက်မှာအဆင့်အတန်းနိမ့်ကျနေတဲ့လူဖြူလူတန်းစားတွေကိုတာဝန်မယူသင့်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတည်ရှိ။ ဟုတ်ကဲ့လူဖြူမဟုတ်တဲ့လူတွေဟာဒါကိုကိုင်တွယ်ရမယ်။ သို့သော်လည်းအဘယ်သို့ငါသိလို, ဖြူကလူကအကြောင်းလုပ်ဖို့သွားကြသလဲ
ဤကဲ့သို့သောဆွေးနွေးမှုများသည် Whiteness ရရှိထားသည့်မမြင်နိုင်သောစွမ်းအားကိုဖော်ထုတ်ရန်နှိမ့်ချသောအစတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သူများကသူတို့ပိုင်ဆိုင်သည့်အရာ၏အနှစ်သာရကိုဖော်ပြရန်အခက်အခဲကပြိုင်ပွဲကိုမတည်မငြိမ်ဖြစ်စေသည်။
နောက်ဆုံးတွင်အဖြူရောင်မမြင်နိုင်ခြင်းသည်ဤကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူမျိုးရေးခွဲခြားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အားတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သည့်လိမ်လည်မှုအဖြစ်ဖော်ပြသည်။ အမျိုးသမီးများနှင့်လူကြီးလူကောင်းများအနေဖြင့် White ၏နောက်ကွယ်တွင်တိကျသောအဓိပ္ပါယ်များကိုမမြင်တွေ့ရပါ။